Love Joshi | It is about academic writing, travelogue, gajals, blog, stories & poems etc. | Page 2
कति किलोको माला लाउनु भो ?
कति किलोको गाली खानु भो ?
ढाँटको खेती गर्दै कति सपना बाँड्नु भो ?
नेपाली जनतामा कति विपना बाँड्नु भो ?
कति वैठकका वैठक बस्नु भो ?
कति सट्टा पट्टा, कति भत्ता खानु भो ?
कति पाथी चिल्ला कुरा गर्नु भो ?
जाँको तैं जनता, तपाई कति माथि पुग्नु भो ?
समता,समावेसी, सहभागीको कति नारा चर्काउनु भो ?
जात भात धर्म भाँडी,कति धार्नी डलर झार्नु भो ?
दलबाट दल फुटाइ कति दल जन्माउनु भो ?
पुगेन भाग मेरो भन्दै, सधैं ठूलो भाग खोज्नु भो ?
वाल वनिता बृद्ध बृद्धा कति बेसहारा पार्नु भो ?
गाम वेसीमा आमाका कति छोरा वलिदान गर्नु भो ?
व्यवस्था बदल्न कति जन युद्ध लड्नु भो ?
धन युद्धमा कति कुवाँ पुर्नु भो ?
झुठको पापड बेली बेली,
जनताको कति झापड खानु भो ?
– ( २०७१ पुस २२ मंगलवार )
पौरखीहरू स्वदेश फर्क ।
पौरखीहरू स्वदेश फर्क
देश बाहिर गएका पौरखीहरू
स्वदेश फर्क ।
नेपाली मन लिएर घर फर्क
अार्जेको ज्ञान,विज्ञान लिएर फर्क
सिकेको सीप लिएर फर्क
मातृभूमि बाँझो छ,
कुषि प्रविधि लिएर फर्क ।
चौतारीहरू बिरानो छन् ।
विकासका सूत्र लिएर फर्क ।
उजाड छन् ।
सिर्जनसील हातहरू लिएर फर्क ।
स्रोत हुन् रोजगारीका
उद्यमी भएर फर्क ।
नौलो प्रविधि लिएर फर्क ।
समृद्ध पार्नु छ देश,
सक्दो लगानी लिएर फर्क ।
पराधीन छ अर्थतन्त्र,
अात्मनिर्भर तन्त्र लिएर फर्क ।
छैन जनउत्तरदायी राजनीति
यसलाई सफा गर्न फर्क ।
अब तिम्रै पालो हो,
१० देखि १५ वर्षमा
तिम्रो हातमा अर्थतन्त्र
तिम्रै हातमा शासन सत्ता ।
देश हाँक्न –
हातेमालो गरी फर्क ।
सुन्दर देश हाम्रो,
पर्यटन उद्यमी बनेर फर्क ।
अनेक देश पुगेका हो !
स्वदेश बनाउन फर्क ।
उपयोग गरे पुग्छ ।
स्वदेशमै पौरख गर्न फर्क ।
बन्द हडताल अान्दोलन
सीमा भन्दा बढी भयो,
नियन्त्रण गर्न यस्लाई
गोलबन्द भई फर्क ।
ढींडो गुन्द्रुक सीस्नो
धेरै भयो होला ।
त्यसको स्वाद उस्तै छ,
पस्की दिन्छिन् अामा मायाले ,
मुख चोख्याऊन फर्क ।
मारूनी रोदी सेलो डेउडा र अरू
संस्कृति जोगाउन फर्क ।
घर बाहिर भएकाहरू
घर – घर फर्क ।
देश – देशमा रहेकाहरू हो !
नेपाली मन लिएर
नेपाल फर्क ।
( – २०७३ / १२ / ३० / ०४ / १० बजे रात्री )